Maxaa sababay in ciidamada Jabuuti ee AMISOM aysan sanad helin mushaarkooda? | Somsoon
Home WARAR Maxaa sababay in ciidamada Jabuuti ee AMISOM aysan sanad helin mushaarkooda?
Maxaa sababay in ciidamada Jabuuti ee AMISOM aysan sanad helin mushaarkooda?
Ciidamada dalka Jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM eek u sugan qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in xilligan ay wajahayaan mushaar la’aan heysata in muddo ka badan sanad.
Wargeys lagu magacaabo Indian Ocean Newsletter oo soo xiganaya saraakiil AMISOM ah ayaa sheegay in qeybaha kale ee ciidamada AMISOM ay qaataan mushaaraadkooda bil kasta, balse kuwa Jabuuti aysan helin muddo ku siman hal sano.
Askariga kasta oo ka mid ah ciidamada Jabuuti ee AMISOM ayaa mushaar ahaan u qaadan jiray 800 oo Dollerka Mareykanka ah, waxaana lagu soo warramayaa in Midowga Afrika uu mushaarka ciidamadaas ku wareejiyey dowladda Jabuuti, isla markaana looga fadhiyo in ay iyadu siido ciidamada ka jiooga Soomaaliya musharka loogu dhiibay.
Ciidamada Jabuuti ee ka howlgala Somalia ayaa sida la sheegay cabashadooda waxay soo jiitamaysay muddo dheer, walina kama jawaabin dowladda Jabuuti oo la sheegay in loo weeciyay dhaqaalihii loogu tala galay.
Article horeJubaland organizes President’s inauguration a mid pressure
Article socoda Khasaare ka dhashay colaad beeleed ka taagan degmada Kaxda